Mogadishu Journal » 2017 » July » 6
Ciidamada AMISOM oo dad ku dilay dulleedka magaalada Muqdisho
Mjournal :-Laba qof ayaa dhimatay mid kalana waa uu dhaawacmay kadib markii baabuur la sheegay inuu ka mid yahay kuwa ciidamada AMISOM uu dulmaray maanta dad rayid ah oo waddada marayey, deegaanka Ceelasha Biyaha. Dad ka caraysan dhacdadaasi ayaa la sheegayinay bannaanbaxeen isla...
A contingent of security personnel was on Wednesday deployed to hunt suspected Al-Shabaab terrorists who killed three police officers and razed a police station. In the Wednesday 5am incident at Pandanguo village, Lamu West Sub-County, the attackers commandeered a police vehicle...
Somalia-based terror group Al-Shabaab has claimed it killed dozens of Kenyan police and soldiers in a raid in Pandanguo in Kenya’s Lamu County. It is believed the group claimed responsibility for the attack, which occurred on Wednesday (5 July), via an affiliated news...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Alle ha u naxariistee Al Callaamah Sheekh Shariif Cabdinuur Shariif Xasan. Marxuumka oo xalay ku geeriyooday magaalada barakeysan Makka Al Mukarrama ee Boqortooyada...
Guddoomiye Jawaari oo dib ugu laabtay magalada Muqdisho
Mjournal :-Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kaddib fasax uu dibadda ugu maqnaa muddooyinkii u dambeeyay. Jawaari ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan cadde ee magaalada...
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in uu caafimaadiisu wanaagsan yahay
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliland,Axmed Maxamed Siilaayo oo ku sugan dalka Imaaradka Carabta ayaa beeniyay xaalad caafimaad inuu halkaas u joogo,isagoo soo duubay muuqaal kooban oo xaaladdiisa caafimaad uu uga hadlay. Warbaahinta gudaha Soomaaliland ayaa baahisay in madaxweyne...
Amar ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka
Mjournal :- Wasaaradda Amniga gudaha ee xukuumada Soomaaliya ayaa soo saartay cusub oo ku wajahan shirkadaha ganacsiga ee heysta ilaalada gaarka ah. Qoraal ka soo baxay Xafiiska Wasiirka Amniga gtudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa ayaa muddo Soddon cisho ah loogu qabtay...
Sawirro meydadka rag ka tirsan Al -shabaab oo la soo bandhigay
Mjournal :-Ciidanka Jubbaland ayaa maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ku laayay deegaanka Lugloow oo dhinaca Waqooyi magaalada Kismaayo ka xiga qiyaastii 17-KM. Saraakiisha Jubbaland ayaa warbaahinta u soo bandhigay Maydadka Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo lagu laayay...
Dilal iyo weeraro xalay ka dhacay magaalada Muqdisho
Mjournal :- Afhayeenka Maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane ayaa faahfaahin ka bixiyey dilal iyo qaraxyo xalay ka dhacay qeybo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho. Xalane ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan ciidamada dowlada oo uusan magaciisa sheegin lagu dilay...